Ny isan-karazany mampiaiky ny bibidia any Australia | Fitsangatsanganana tanteraka
Daniel | | Aostralia
Iray amin'ireo antony maro mahatonga an'i Aostralia ho firenena mahavariana toy izany ny harena voajanahary manaitra azy. ny Bibidia aostralianina izy io dia natokana ho an'ny ankamaroan'ny karazan-javaboary tsy hita intsony na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Saingy misy fanazavana ara-tsiansa momba ny fisian'ny maro ary tena mahagaga endemism any amin'ny tany aostralianina.
Ny maha-izy azy ny biby aostralianina dia noho lafin-javatra roa: ny jeolojika sy ny klimatolojika. Mandra-pahatongan'ny 50 tapitrisa taona ny faritany izay ao anatin'ny Aostralia ny renirano dia nampidirina tao amin'ny supercontcent Gondwana (izay nahitana an'i Amerika atsimo, Afrika ary Antarctica koa). Nisaraka tamin'ny sisin-tanety sisa i Aostralia ary nitoka-monina. Tamin'izany fomba izany, ny biby sy ny zavamaniry dia niova tsy mitovy amin'ny zava-maniry sy ny biby eto amin'izao tontolo izao.
Na dia nifandona aza ny kaontinanta Azia sy Oseania 5 tapitrisa taona lasa izay, dia nijanona ny fitokanana. Ny antso Tsipika Wallace, izay miitatra manerana ny vondronosy Austro-Indonezia, dia sakana voajanahary izay nanakana ny fifandraisan'ny biby izay nisy tany amin'ny faritra zoogeographic tsirairay avy.
Ny tena vokatr'izany rehetra izany dia ny fahaterahana, ao anatin'ny filan'ny biby mampinono, vondrona evolisiona iray tsy mitovy amin'ny faritra hafa amin'ny planeta: ny ny karazana kangoroa.
1 Fauna ao Aostralia: Biby mampinono
1.3 Devoly Tasmanianina
2 Fauna ao Aostralia: Vorona
3 Amphibians, trondro ary biby mandady amin'ny biby any Aostralia
4 Ny platypus
Fauna ao Aostralia: Biby mampinono
Ny biby mampinono aostralianina dia mizara ho vondrona lehibe roa: ny karazana kangoroa y placentals. Ny tena maha samy hafa azy dia ny vavy ny teo aloha dia omena a kitapo na paosy izay iainan'ireo tanora aorian'ny nahaterahany. Ny kangaroo, ny koala na ny Tasmanian Devil no ohatra malaza indrindra.
Ny kangaroo, ny biby malaza indrindra any Aostralia
Rehefa mieritreritra ny biby any Aostralia isika, ny sarin'ny a kangaroo mitsambikina. Ireo rambony ireo dia manana rambony lava sy tongotra be hozatra izay mamela azy ireo hivezivezy amin'ny fitsambikinana lehibe. Izy ireo dia biby ahitra ary matetika amin'ny alina. Misy karazany maro (kangaroo volondavenona, kangaroo mena, wallabee, sns).
Ao ambadiky ny kangoroa, ny biby malaza indrindra any Aostralia dia tsy isalasalana fa ilay koala Ity marsupial kely ahitra ity dia miaina amin'ny satro-boninahitr'ireo hazo kininina, izay raviny no tena fihinany. Koalas dia monina amin'ny faritra atsinanan'ny nosy. Ny tena mampiavaka azy ireo dia ny sofiny lehibe sy ny fandaminana ny rantsan-tongony amin'ny rantsantongony, miaraka amin'ny ankihiben-tànana mifanohitra roa, izay ahafahan'izy ireo mifikitra tsara amin'ireo rantsan'ny hazo. Ny fijeriny sy ny endriny "teddy bear" dia mampalaza azy amin'ny ankizy.
Io no biby mampinono lehibe indrindra any Aostralia. Izy dia mpihaza, mpandroba ary masiaka amin'ny fitondran-tena. Ny fisehoany dia ny alika kely misy volony mainty, misy valanoranom-bato lehibe mampahatsiahy hyena. Araka ny tondroin'ny anarany dia onenana ny nosy tasmania, na dia taonjato vitsivitsy lasa izay aza dia niely nanerana an'i Aostralia.
Dingo (amboadia aostralianina)
Anisan'ny biby mampinono placental, dia manasongadina ny Dingô, antsoina koa amboadia aostralianina. Inoana fa tonga tany amin'ny kaontinanta nosy ity canid ity tokony ho 5.000 XNUMX taona lasa izay. Mipetraka any amin'ny tapany avaratry ny firenena ny ankamaroany, ankoatry ny faritra hafa any Azia atsimo atsinanana. Satria amboadia betsaka noho ny alika, ireo biby ireo dia tsy afaka nompiana. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy amin'ny anatomia dia ny fofony lava. Ity karazana ity dia voaheloka ho lany tamingana, na dia tsy fanenjehan'ny olombelona aza, fa ny hybridization mitohy sy tsy azo ihodivirana miaraka amina karazana canine sasany.
Biby mampinono malaza hafa dia ny bandicoot, biby mpikiky monina ny faritra ala sy ny Wombat, izay mitovy amin'ny bera kely.
Fauna ao Aostralia: Vorona
Anisan'ireo vorona aostralianina, ny haben'ny karazana boloky ary koa vorona kely ala toa ny robina aostralianina na ny vorona lira. Misy koa vorona mpihaza manan-danja toy ny voromahery matanjaka. Ary eo amin'ny voron-dranomasina, ny karazany manan-danja indrindra amin'ny pelikanina aostralianina ary ny penguin manga, ny karazana penguin tokana miorina amin'ny morontsirak'i Aostralia.
ny vorona tsy manidina, lehibe ny sasany. ny emu Io no vorona faharoa lehibe indrindra eto an-tany, ary ny ostrich ihany no mihoatra ny habeny. Miaraka aminy dia afaka mihazakazaka haingana be izy. Ny emus olon-dehibe dia afaka refesina hatramin'ny 130 santimetatra ary milanja mihoatra ny 40 kg. Volondavenona ny volony, misy maherin'ny 700.000 ny specimens miparitaka eran'ny firenena.
Amphibians, trondro ary biby mandady amin'ny biby any Aostralia
Ny mozaikà mahatalanjona ao amin'ny fiompiana aostralianina dia tanteraky ny karazana amphibiana marobe (indrindra sahona hazo) sy ny mandady. Amin'ireto farany, ilaina ny manasongadina ny habetsahan'ny karazana bibilava misy poizina, ary koa bibilava sy karazan-tsokosoko hafa. Any amin'ny morontsirak'i Aostralia koa dia misy karazana sokatra (sokatra, maintso, lokanga ary ny hafa). ny androngo maro an'isa koa izy ireo. Avy amin'ny karazana karazany dia ilaina ny manonona ny Moloka, ny androngo goavambe na ny androngo misy lela manga.
Fahita ihany koa ny endemisma trondro aostralianina, indrindra ireo izay monina amin'ny renirano sy farihy ao amin'ny firenena. Etsy ankilany, ny karazan-dranomasina dia mitovy amin'ny an'ireo izay hita any amin'ny ranon'i Azia atsimo sy ny faritra hafa amin'ny Ranomasimbe Pasifika.
Ny platypus, iray amin'ireo biby hafahafa indrindra eto an-tany
Farany, karazana iray izay, noho ny mampiavaka azy, dia mendrika toko iray misaraka: ny ornithorrinc. Imbetsaka izy no nofaritana ho toy ny biby hafahafa indrindra eto an-tany. Izy io no tena solontenan'ny vondrona biby antsoina hoe monotremes, izay mizara ny mampiavaka ny biby mampinono sy ny mandady. Ohatra: manana volo izy ireo fa oviparous ny ré reproduction (atody). Misy karazana monotremes hafa koa, saingy tsy misy mampiavaka an'io iray io.
Anisan'ny mampiavaka azy hafa, misy poizina ny platypus, manana orona miendrika gana gana izy, ny rambony dia mitovy amin'ny an'ny ombivavy ary ny tongony dia toy ny an'ny otter. Tamin'ny fotoana voalohany nahitana santionany tamin'ity biby ity tany Eropa, dia noheverina ho sandoka izy io.
Na izany na tsy izany dia biby ankafizin'ny aostralianina izy io (hita eo amin'ny farantsakely 20 cent aza), izay mahazo fiarovana manokana ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Tsy manam-paharoa ny biby ao Aostralia